घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू क्रोएसियाई फुटबल खेलाडीहरू मार्सेलो ब्रोजोविक बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
सुरू गरेर, उनको उपनाम छ “क्रकोडाइल“। हामी तपाईंलाई मार्सेलो ब्रोजोविक बाल्यकाल कहानी, जीवनी, पारिवारिक तथ्य, अभिभावक, प्रारम्भिक जीवन र अन्य लोकप्रिय घटनाहरूको पूर्ण कभरेज दिन्छौं जब उनी बच्चा थिए जबदेखि उनी लोकप्रिय भए।
मार्सेलो ब्रोजोभिक छवि क्रेडिटहरूको जीवन र उदय: इन्स्टाग्राम, गोल र ईएसपीएन।
हो, सबैलाई थाहा छ Brozovic एक बहुमुखी मिडफिल्डर हो। जे होस्, केहि थोरैले मार्सेलो ब्रोजोभिकको जीवनीको हाम्रो संस्करणलाई विचार गर्छन् जुन धेरै रोचक छ। अब, थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
मार्सेलो बोजोभिक बाल्यकाल कहानी:
मिडफील्ड सामान्यबाट सुरु गर्नका लागि - मार्सेलो ब्रोजोभिय नोभेम्बर १ 16 1992 २ को १ XNUMX तारिख क्रोएशियाको जाग्रेब शहरमा जन्म भएको थियो। उहाँ आफ्नो आमा सान्जा ब्रोजोभिय र उनका बुबा इभान ब्रोजोभियामा जन्मनुभएको थियो।
मार्सेलो ब्रोजोविक बचपन फोटो। यो हामीले उसको सब भन्दा चाँडो जीवन भेट्टाउन सक्दछौं। क्रेडिट: Picuki
मार्सेलोको जन्मस्थल जाग्रेब, अक्सर "भनिन्छड्रेगन को शहर“। शहर ड्र्यागन बाध्य छ र साँपको सरीसृप र मध्यकालीन मूर्तिहरूले भरिएको छ। यस अनुसार TheLocal, जाग्रेबलाई ग्रीसको पौराणिक कथाको लोकप्रिय श्राप सर्प रानी भएको हल्ला छ -मछली"जसले यसको सुरुsमा गहिरो तल गाडे। तल मार्सेलो ब्रोजोभिकका आमा बुबाको एउटा फोटो छ - उसको जस्तो देखिने बुबा, इवान.
मार्सेलो ब्रोजोभिकका आमा-बुबामध्ये एक भेट्नुहोस्। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
यद्यपि मार्सेलोको यस्तो देखिन्छ कि त्यसले आफ्नो जाति र परिवारको उत्पत्तिको बारेमा धेरै कुरा गर्दैन, हामी पक्का जान्दछौं कि ऊ क्रोएसियाली नागरिक हो। वास्तवमा उनी झाग्रेबको भेलिका गोरिकाको नजिकै ओकुजे गाउँमा हुर्केका थिए जहाँ उनी आफ्ना भाई, प्याट्रिक ब्रोजोभिस र बहिनी, ईमा ब्रोजोभिकसँगै हुर्केका थिए।
उनी झाग्रेबको एउटा गाउँमा हुर्केका थिए। छवि क्रेडिटहरू: विश्व एटलस र इन्स्टाग्राम।
गाउँमा हुर्किसकेका, यो पहिले नै निश्चित थियो कि मार्सेलोको फुटबलमा शुभ भविष्य हुनेछ। यो ज्यादातर यो तथ्य हो कि मार्सेलोका बुबा आफ्ना छोरालाई कसरी उत्तम खेल खेल्न सिकाउने प्रशिक्षणमा ठूलो थिए।
मार्सेलो बोजोभिक प्रारम्भिक वर्ष:
मार्सेलो9-१० वर्षको उमेरमा, उनी प्रतियोगिताको फुटबल अनुभव गर्ने दृष्टिकोणले नोवी ज़ाग्रेब नजिकैको स्थानीय क्लब ह्रवात्स्की ड्रैगोभल्जाकको युवा प्रणालीमा सामेल भए।
9-10 वर्ष पुरानो Hrvatski Dragovoljac मा एक फुटबल उन्माद थियो। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम र ह्र्वात्स्की।
ड्र्यागोभल्जाकमा हुँदा क्लबका प्रबन्धकहरूले यो महसुस गर्न धेरै समय लिएन कि मार्सेलो उनीहरूको हेरचाहमा एक दुर्लभ रत्न हो किनकि उनी प्राविधिक रूपमा राम्रो थिए र लगातार तीन खेल खेल्न सक्थे!
मार्सेलो बोजोभिक प्रारम्भिक क्यारियर जीवन:
यसैले, यो आश्चर्यजनक थिएन कि मार्सेलोले २०१० को जुलाईमा क्लबको साथ आफ्नो व्यावसायिक पदार्पण गरे सम्म ड्र्यागोभल्जाकको स्तरमा तीव्र गतिमा वृद्धि भएको छ। यद्यपि तत्कालीन १--वर्षीय मिडफिल्डरले आफ्नो प्रोफेस डेब्यू गरेका थिए वयस्कको रूपमा कानुनी रूपमा हेरिएको थियो, उहाँबाट धेरै आशा गरिएको थिएन।
वास्तवमा, उहाँ क्लबको युवा प्रणालीको अचम्मको बच्चा हुनुहुन्न जुन उहाँबाट स्नातक गर्नुभयो। नतिजा स्वरूप, उसले रमाईलोसँग आफ्नै टीममा पहिलो टिम फुटबल खेल्यो कि उनले पहिलो व्यावसायिक गोल मार्च २०११ मा (लगभग पहिलो एक वर्ष पछि उनले पहिलो गोल) बनाए!
मार्सेलो ब्रोजोविक जीवनी- प्रख्यात कथाको लागि उनको मार्ग:
२०११ को जुलाईमा मार्सेलोको क्यारियरको मोड मोडमा आयो जब उहाँ नेके लोकोमोटिभामा सामेल हुनुभयो जब ड्रैगोभोलजाक नाटकमा फसे। यो लोकोमोटिवामा थियो कि मिडफिल्डर बिस्तारै आफ्नो फार्ममा सुधार भयो। उसले क्लबलाई एक महत्त्वपूर्ण मिड-टेबल स्थिति प्राप्त गर्न मद्दत गर्न चार पटक पनि रन बनाए!
उनी लोकोमोटिवमा आफ्नो एक्लो मौसम पूरा गरेपछि अगस्त २०१२ मा सामिल भएको क्लब, दीनोमो जग्रेबमा न त उनी फ्लप नै थिए। के तपाईंलाई थाहा छ मार्सेलोले क्लबको लिग जितेर मद्दत गरेर दिनको मा पहिलो सत्र प्रभावशाली गरी समाप्त गरे? 'दि ब्लूज' २०१२-१– क्रोएसियाई फुटबल कपको दोस्रो चरणमा पुगेको थियो र यसलाई च्याम्पियन्स लिगको समूह चरणमा पुर्‍यायो।
२०१२ मा क्लबमा सामेल भए पछि दीनमो जाग्रेबको भाग्य परिवर्तन गर्न कसले सहयोग गर्‍यो हेर्नुहोस्। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
मार्सेलो ब्रोजोविक जीवनी- उनको ख्याति कथा उठेको:
मार्सेलो ब्रोजोभिकका परिवारका सदस्यहरूको खुशीको कुरा उसले थाहा पाउँदैन जब उसले अन्ततः युरोपमा भिसा लिन आयो। दीनामोमा मार्सेलोको प्रभावशाली ट्र्याक रेकर्डलाई ध्यानमा राख्दै इटालियन पक्ष इन्ट मिलनसँग क्लबको मिडफील्डलाई सुदृढ पार्न - २०१ 2015 मा उनलाई loanणमा हस्ताक्षर गर्ने कुनै डर थिएन। Number 77 नम्बरको शर्ट लगाएर, मार्सेलो एक बहुमूल्य सम्पत्ति साबित भए जसले नेराज्जुरी टेबललाई आफ्नो पहिलो सत्र पछि स्थायी सम्झौता बनायो।
मिडफिल्डरले आउँदो वर्षहरुमा इन्टर मिलनलाई उनीहरूको पैसाको लागि एक रन दिएका छन् मुख्य गोलहरू गरेर र नेराज्जुरीलाई कोपा इटालिया आरामदायक तालिकामा समाप्त गर्न मद्दत गर्दै। बढी के? ऊ एक मुख्य खेलाडी हो जुनसँग यसलाई प्रबन्धक बनाउन के हुन्छ - एन्टोनियो कन्टे सेरी ए मा जुभन्टस प्रभुत्व समाप्त गर्न आफ्नो खोज प्राप्त। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
यो निर्विवाद सत्य हो कि मिडफिल्डर अन्तर मिलानको लागि मूल्यवान छ जुन उसले मुख्य जीत जोगाउन सहयोग गरेको छ। छवि क्रेडिट्स: डेलीमेल।
मार्सेलो ब्रोजोभिक प्रेमिका, पत्नी र बच्चाहरू:
मार्सेलोको क्यारियर जीवनबाट टाढा, उनीसँग फुटबल खेलाडीहरू बीचको सब भन्दा स्थिर सम्बन्ध जीवन हो जसले इटालियन फुटबलमा उनीहरूको व्यापार चलाउँछन्। उनको प्रेमिका बनेको Sivija Lihtar को धन्यवाद। सिविजा मार्सेलोको प्रेमिका कहिले भयो भन्ने बारेमा धेरै थाहा छैन। जे होस्, मिडफिल्डरको जीवनमा उनको उपस्थितिले उनको क्यारियरमा धेरै स्थिरता ल्याएको छ।
उनीहरूको डेटि earlyको प्रारम्भिक वर्षहरूमा मार्सेलो ब्रोजिभिक र उनको भावी पत्नी सिविजा लिहत्तरको थ्रोब्याक फोटो। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
त्यसकारण मिडफिल्डरले आफ्नी स्वास्नी बनाए र उनीहरूको वैवाहिक जीवनमा रमाए। दम्पतीको लेख्ने समयमा दुई बच्चा हुन्छन्। तिनीहरू एक छोरी - अरोरा (जन्म २०१ 2016) र एक छोरा - राफेल (जन्म २०१ 2019)। तल मार्सेलो ब्रोजोभिकको श्रीमती र बच्चाहरूको एक प्यारा फोटो छ जुन उनीहरूले २०१ in मा क्रिसमस मनाउँछन्।
२०१ 2019 मा क्रिसमस मनाउने क्रममा मार्सेलो ब्रोजोभिकको श्रीमती र बच्चाहरूको मनमोहक फोटो। क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
मार्सेलो बोजोभिक पारिवारिक जीवन:
यो निस्सन्देह सत्य हो कि सबैको परिवार छ र तिनीहरू जीवनको सबैभन्दा बहुमूल्य चीजहरू हुन्। हामी तपाईलाई मार्सेलो ब्रोजोभिकका परिवारका सदस्यहरुको बारेमा उसको बारेमा अरु तथ्यहरु ल्याउँछौं।
मार्सेलो ब्रोजोभिकका पिताको बारेमा बढि:
इभान ब्रोजोभिय अद्भुत मिडफिल्डरका बुवा हुन्। उहाँ फुटबल खेलाडी हुनुहुन्छ जसले आफ्ना परिवारका सदस्यहरू र नजिकका परिचितहरू पनि खेलमा आउँछन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्दछ। वास्तवमा, इभान मिडफिल्डरको प्रारम्भिक जीवनको बखत मार्सेलोको प्रशिक्षक थिए र शीर्ष फ्लाइट फुटबलमा उनको सफलता वास्तविकतामा परिणत भयो भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न गए।
मार्सेलो ब्रोजोभिक आफ्नो बुबा इवानसँग लगत्तै इन्टर मिलानमा सामेल भए। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
मार्सेलो ब्रोजोभिकको आमाको बारेमा अधिक:
सानजा ब्रोजोभिय मिडफिल्डरको मायालु र सहयोगी आमा हुन्। उनी मार्सलोले आफ्नो बाल्यकाल फुटबलको दौडान खेलेको प्रत्येक खेलमा सब भन्दा ठूलो चीयरलीडर थिइन। उनले आफ्नो पतिलाई मार्सेलोको नम्र शुरुआतको रेकर्ड राख्न पनि सहयोग गरेकी थिइन् उनको सहायताको लक्ष्यबाट। यी कारणहरूले गर्दा मार्सेलोले आफ्ना अभिभावकलाई माया गर्दछन् र उनीहरूलाई आजसम्म उच्च सम्मानका साथ राख्छन्।
मार्सेलो ब्रोजोभिकका भाई बहिनीहरूको बारेमा:
मार्सेलो झाग्रेबको ओकुजे गाउँमा एक मध्यम-वर्ग पारिवारिक पृष्ठभूमिमा दुई भाई-बहिनीहरूको साथ हुर्किइन्। उनीहरूले उनको सानी ज्ञात बहिनी, ईमा ब्रोजोभिक र भाई प्याट्रिक ब्रोजोभिक समावेश गर्दछन्। मार्सेलोले जस्तै प्याट्रिकको पनि फुटबलमा फराकिलो क्यारियर थियो तर युवा फुटबलको स्तरमा उत्रने दृढताको अभाव भयो। जे होस्, ऊ मार्सेलोको क्यारियरको समर्थक हो र मिडफिल्डरले हासिल गरेको उचाइमा गर्व गर्दछ।
के तपाई दुबै भाईहरु बीचको समानता देख्न सक्नुहुन्छ? छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
मार्सेलो ब्रोजोभिकका नातेदारहरूका बारे:
मार्सेलो ब्रोजोभिकका आमाबुबा र भाईबहिनीहरूबाट टाढा मिडफिल्डरको पारिवारिक जरा वा पुर्खाहरू, विशेष गरी उसको बुवा र बुवा हजुरबा हजुरआमाको बारेमा धेरै थाहा छैन। मिडफिल्डर्स काकी, काका र काका / काकीहरू का लागि बोर्डको भर यही नै जान्छ। त्यस्तै, यस बायो लेख्दा उसको भतिजा र भतिजाहरू अज्ञात छन्।
मार्सेलो बोजोभिक व्यक्तिगत जीवन तथ्यहरु:
उसको फुटबल तत्वबाट बाहिर, मार्सेलो ब्रोजोविकको एक ठूलो व्यक्तित्व छ जसले स्मार्ट, सहज ज्ञान युक्त, उदार र मेहनती लक्षण वृश्चिक राशिको हस्ताक्षरलाई एक आवेशपूर्ण र प्रशंसनीय व्यक्तित्वको साथ मिलाउँदछ।
यसका अतिरिक्त उनले निजी र व्यक्तिगत जीवनको बारेमा विरलै तथ्यहरू प्रकट गर्दछन् जबकि गतिविधिहरुमा उसले टेनिस खेल्नु, बास्केटबल खेल खेल्नु, पौडी खेल्नु र आफ्नो परिवार र साथीहरुसंग राम्रो समय बिताउनु समावेश छ।
फुटबल जीनियस शायद सायद टेनिस खेल्छन् तर मार्सेलो! छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
मार्सेलो बोजोभिक जीवन शैली तथ्यहरू:
मार्सेलो ब्रोजोविकको कुल सम्पत्ति फेब्रुअरी २०२० सम्ममा १ million मिलियन डलर भन्दा बढीको अनुमानित रकम हो। उसको द्रुत गतिमा बढ्ने शुद्ध मुल्यमा योगदान दिने ज्याला र पारिश्रमिक उसले फुटबल खेल्दा प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक र पारिश्रमिक हो। यसको अतिरिक्त, अनुमोदनहरू उसको खर्च गर्ने बानी बसाल्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
नतिजाको रूपमा, मिडफिल्डरले विलासी जीवन शैली बाँच्नको लागि बैंकहरू तोड्नु आवश्यक पर्दैन। मार्सेलोको राम्रो जीवनका लागि सूचकहरू विदेशी कारहरू हुन् जुन उनी चढ्छन्। ऊ ठूला घरहरू र अपार्टमेन्टहरूमा बस्छ जुन उसको आवासको लागि लगातार परिवर्तन भइरहेको स्वादसँग मेल खान्छ।
यो महँगो मर्सिडीज जीप उसको असंख्य लक्जरी सवारी मध्ये एक हो। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
मार्सेलो बोजोभिक तथ्यहरू:
हाम्रो मार्सेलो ब्रोजोविक बचपनको कथा र जीवनी समेट्नको लागि, मिडफिल्ड सामान्यको बारेमा थोरै ज्ञात वा अनकही तथ्यहरू छन्।
लेख्ने समयमा, क्रोसियाली पेशेवर फुटबलरको इन्टर मिलनसँगको सम्झौताले उनलाई ठूलो तलब कमाउँछ 6.4 मिलियन यूरो (5.5 मिलियन पाउन्ड) प्रति वर्ष। मार्सलो ब्रोजोभिकको तलबलाई संख्यामा क्रunch्च गर्दै, हामीसँग निम्न ब्रेकडाउन छ।
युरोमा मार्सेलो ब्रोजोविकको तलब ब्रेकडाउन (€)
पाउण्ड (£) मा मार्सेलो ब्रोजोभिकको तलब ब्रेकडाउन
प्रति वर्ष आय € 6,400,000 £ 5,500,000
प्रति महिना आय € 533,333,3 £ 458,333.3
प्रति हप्ता आय € 123,076.9 £ 105,769.2
प्रति दिन आय € 17,534.25 £ 15,068.49
प्रति घण्टा आय € 730.6 £ 627.85
प्रति मिनेट आय € 12.18 £ 10.46
प्रति सेकेन्ड आय € 0.20 £ 0.17
हामीले मार्सेलो ब्रोजोविकको तलब हरेक सेकेन्डमा बढाएका छौं, यसलाई प्रति सेकेन्ड कमाउनेमा क्रन्च गर्दै। तल फेला पार्नुहोस्;
यो यो छ कि मार्सेलो ब्रोजोभिकले कत्ति धेरै आर्जन गर्‍यो किनकी तपाईले यो पृष्ठ हेर्न शुरू गर्नुभयो.
यदि तपाइँले माथि के देख्नुहुन्छ अझै पढ्छ (०), त्यसो भए यसको मतलब यो हुन्छ कि तपाइँ एएमपी पृष्ठ हेर्दै हुनुहुन्छ. अब क्लिक गर्नुहोस् यहाँ सेकेन्डमा उसको तलब वृद्धि देख्न. तपाईंलाई थाँहा थियो?… यो कम्तिमा यूरोपमा बसोबास गर्ने औसत कामदार लिने छ 15.27 वर्ष Brozovic १ महिनामा आर्जन गरे जस्तै कमाउन।
मार्सेलो ब्रोजोभिकको फिफा दर्जा:
उसको देशवासी जस्तो छैन Josip Ilicic, मार्सेलो ब्रोजोविकसँग imp२ को कम कल्पित फिफा रेटिंग छ यसका प्रभावशाली ट्र्याक रेकर्डहरू जुन क्रोएशियालाई २०१ world विश्व कपको फाइनलमा पुग्न सहयोग पुर्‍याउने हो। जे होस्, त्यहाँ आशा छ कि भविष्यमा उसको रेटिंग्स सुधार हुनेछ।
ऊ उच्च मूल्या de्कनको योग्य छ के तपाइँ सहमत हुनुहुन्न? छवि क्रेडिट: SoFIFA।
मार्सेलो ब्रोजोभिक ट्याटूहरूको बारेमा:
मार्सेलो फिजिकको नजिकबाट अध्ययनले पत्ता लगायो कि उसको प्रभावशाली उचाइ feet फिट ११ इन्चको बायाँ हातमा ट्याटूले पूरक छ। मिडफिल्डर अझै पनी आफ्नो छाती, घाँटी, खुट्टा, पछाडि र पेटमा यस्तै कला पाउन सक्दछन्।
थप ट्याटुहरूको लागि पर्याप्त ठाउँ छैन। के तपाईं सहमत हुनुहुन्न? छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
मार्सेलो ब्रोजोभिक उपनाम को बारे मा:
मार्सेलो ब्रोजोभिकलाई "मगरमण्डल" उपनाम दिइयो किनभने उसले एक दुर्लभ मगरमच्छ फिस्याउने ब्लक तान्यो जुन रोकियो Luis Suarez बार्सिलोनाको च्याम्पियन्स लिग संघर्षको दौडान इन्टर मिलनको बिरूद्ध फ्री किक गोल गर्नबाट। मार्सेलो उपनामको नाम मन पराउँछिन् र एक पटक हेलोवीनको समयमा गोहीको पोशाक लगाएको आफ्नो फोटो पोष्ट गर्छिन्।
फोटोहरुमा उसको उपनाम बारे तथ्यहरु। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
मार्सेलो ब्रोजोभिक मेडल अफ ऑनरका बारे:
२०१ 2018 मा, मार्सेलो ब्रोजोभिकका परिवारका सदस्यहरू क्रोएशियाका केही परिवारहरूमाझ हुन पाएकोमा गर्व थिए जसले उनीहरूको आफ्नै (मार्सेलो) प्राप्त गरेको देखेका छन्। ड्यूक Branimir को आदेश।
यो ड्यूक Branimir को आदेश मात्र केहि मानिसहरु लाई दिइएको छ मार्सेलो ब्रोजोभिक ती मध्ये एक हो। क्रेडिट: Pucuki
पदक, को रूपमा परिचित रातो घुँडा Branimira (क्रोएशियन भाषामा) क्रोएशिया रिपब्लिकले दिएको सातौं महत्वपूर्ण पदक हो। मारियो म्यान्डजुकिक र Luka Modrić यो जितेको अन्य धेरै क्रोसियाली फुटबलरहरू मध्ये।
मार्सेलो ब्रोजोभिकको धर्मको बारेमा:
आफ्नो देशभवन जस्तै लुका मोररिक, मार्सेलोले विश्वासको मामिलामा सार्वजनिक रूपमा आफ्नो असर प्रदर्शन गरेका छैनन्। यद्यपि, ती समस्याहरू धेरै हदसम्म उहाँ एक विश्वासीको पक्षमा छन्। सुरुमा, मार्सेलो ब्रोजोभिकका आमा बुबाले उनलाई क्रिश्चियन घरमा हुर्काए। अझ बढि, उनका भाई र छोरा क्रमशः प्याट्रिक र राफेल नाममा जवाफ दिन्छन्।
मार्सेलो ब्रोजोविकको विकी नॉलेज बेस:
मार्सेलो ब्रोजोविकको जीवनी तथ्यहरूको यो अन्तिम खण्डमा तपाईले आफ्नो विकी ज्ञानको आधार देख्नुहुनेछ। यसले तपाईंलाई संक्षिप्त र सजिलो तरिकामा उसको बारेमा जानकारी फेला पार्न मद्दत गर्दछ।
मार्सेलो ब्रोजोविक विकी इनक्वायरी
पुरा नाम: मार्सेलो ब्रोजोभिएस (क्रोएशियन उच्चारण: [martsělo brǒːzoʋitɕ]
जन्म मिति र स्थान: १ November नोभेम्बर १ 16 1992 २ (जग्रेब, क्रोएशिया)
अभिभावकको नाम: इभान ब्रोजोभिया (बुबा) र सान्जा ब्रोजोभिया (आमा)
भाई बहनको नाम: ईमा ब्रोजोभिक (बहिनी) र प्याट्रिक ब्रोजोभिक (भाई)
देशको सम्मान पदक: ड्यूक Branimir को आदेश
उमेर: २ ((२०२० फेब्रुअरीमा)
उचाइ: 1.81 मीटर (5 फुट 11 मा)
व्यवसाय: फुटबलर (मिडफिल्ड)
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो मार्सेलो ब्रोजोविक बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्या reading्कहरू पढ्नका लागि धन्यबाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाइँले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।